अब सरकारी अस्पतालमै बाेनम्याराे प्रत्याराेपण – erupse.com
काठमाडौं, १८ भदौ – निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) मा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक गरिएको छ । यससँगै रक्त क्यान्सरका बिरामीका लागि अत्यावश्यक मानिएको यो सेवा सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ मूल्यमा प्राप्त हुने भएको छ । अस्पतालले कैलालीका रेडिक्स भट्ट (परिवर्तित नाम) मा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गरेको हो । रक्त क्यान्सर तथा बोनम्यारो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्यालको टिमले प्रत्यारोपण गरेको हो ।
रक्त क्यान्सर भएको पत्ता लागे पनि केही हरेस नखाई रेडिक्सले औषधि र किमो लगाएकै भरमा एसएलसी दिए र राम्रो ग्रेड ल्याएर पास भए । उनको दृढता र इच्छाशक्तिको अगाडि क्यान्सरले हार खायो र पाएको सफलताले रोगसँग लड्ने नयाँ ऊर्जा दियो । ‘मैले फागुन ६ गते र २६ गते गरेर दुई पटक किमो लिएर चैत १८ देखि एसएलसी दिएको थिएँ,’ १९ दिनदेखि चिकित्सक र नर्सबाहेक कसैले पनि प्रवेश गर्न नपाउने विशेष प्रकारको कोठामा रहेका उनले भने । उनले भने, ‘धेरै नै पढाइ छुटेकाले अझै राम्रो गर्न सकिनजस्तो लाग्छ ।’
बोनम्यारो प्रत्यारोपण दुई किसिमका हुन्छन् अटोलोगस र एलोजेनिक । अटोलोगस भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको शरीरबाट स्टेमसेल निकालेर त्यही व्यक्तिलाई दिनु हो । यस्तै एलोजेनिक भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको शरीरबाट झिकिएको स्टेम सेल अर्को व्यक्तिलाई दिनु हो ।प्रत्यारोपण सामुहिक उपलब्धी
यस्तै, सिभिलका प्याथोलोजिका प्रमुख डा. समिर न्यौपानेका अनुसार प्रत्यारोपणका लागि नै भनेर अस्पतालमा छुट्टै विशिष्ट ल्याबको स्थापना गरिएको छ । ‘प्रत्यारोपणमा प्रयोग हुने प्रविधि र टेस्टहरु जसले पायो त्यसले गर्न सक्दैन । यसकालागि छुट्टै कोर्स नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्रकारका मेसिनहरुको विशिष्ट प्रकारका टेस्टहरु पछि मात्रै प्रत्यारोपण हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिक